Gaas oo xariga ka jaray waddo Taliyaanigu maalgeliyey oo laga dhisay Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso – Mareeg.com: Madaxwaynaha mamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta Magaalada Boosaaso Xariga kaga jaray Wado Cusub oo Laami ah, taasi oo isku xiraysa Dekeda iyo Laamiga Weyn ee Boosaaso dhanka koonfureed.
Xaflada Xarig jarka oo ka dhacday Hoolka Jaamacada Bariga Afrika ee Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay Maamulka Gobolka Barri, Kan degmada Boosaaso, Wasiiro, Waxgarad, Haween iyo dadwayne kale.
Madaxwaynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Khudbad dheer ka jeediyey Munaasibada ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in Wado Laami ah oo Cusub laga hirgaliyo Boosaaso oo ah xarunta Ganacsiga Puntland.
”Waxaan oran lahaa Hay’adda dhistay Wadadan ee UN-HABITAT wax kale haqaban hadii aad Hal Milyan oo Doolar aad hesho Jid noo geli, waxaanu rabnaa anagu wax waxtar leh oo wadanka ka muuqanaya” Sidaasi waxaa yiri Madaxwayne Gaas .
”Hada waxaa jirta lacag dowlada Germany ugu deeqday Puntland shirkii maalintii dhoweyd aanu ku qabanay Garowe kadib lacagtaasi oo dhan $23.5 Million oo euro, way isoo waydiiyen waxa ay noogu qabanayan, waxana u sheegay inay noogu qabtaan oo kaliya jid” ayuu hadalkiisa raaciyay Madaxwayne Cabdiwali Gaas .
”Boosaaso waxba ma ahaaten Puntland wax ma ahaaten hadaysan jidkaa iyo Dekadaa lahaan lahayn” ayuu yiri Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Gaas.
Mashruuca lagu dhisayay wadadaan Laamiga ah ayaa waxaa bixisay Dowlada Talyaaniga, waxaana fulisay Hay’adda UN-HABITAT, dowlad goboleedka Puntland ayaa iyana fududaysay in mashruucani hirgalo, waxaana dharirika wadadan lagu sheegay 5.9 KM.